Mogadishu Journal » 2021 » March » 16
Xavi wuxuu hayey rikoorka muuqaalka Barcelona ilaa maestro-ka reer Argentine Lionel Messi uu la mid noqday wadartiisa kulankii LaLiga ee Huesca. Lionel Messi ayaa lagu amaanay inuu yahay "kii sixirka ahaa" ka dib markii uu barbareeyay rikoorkii Xavi ee kulamadii Barcelona waxaana...
Concerns grow over reports of blood clotting among some recipients, but WHO urges countries to keep using the COVID vaccine. 16 Mar 2021|Updated: an hour ago More than a dozen countries, mostly in Europe, have suspended the use of AstraZeneca’s COVID-19 vaccine over fears the...
Madaxweyne Farmaajo oo qaatay talaalka cusub ee ka hortaga cudurka COVID-19
Muqdisho:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaatay tallaalka Cudurka COVID-19 ayaa adkeeyey masuuliyadda adag ee shacab iyo dowladba inaga saaran samatabixinta caafimaad iyo nololeed ee dalkeenna. Madaxweynaha ayaa xoojiyey...
Midowga Yurub oo Somalia ka fulinaya Mashruucii ugu weynaa muddo 30 sano ah
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan dhismaha wadooyin muhiim u ah Dalka. Heshiiskan ayaa qeyb ka qaadanaya dhismaha waddooyinkan oo lama huraan u ah kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka, waxaana sida ku xusan...
Madaxweyne Qoor-qoor oo goor dhow soo gaaray Muqdisho iyo Laftagareen oo..
Muqdisho:-Madaxwaynaha Galmudug Axmad Qoor-qoor ayaa goor dhow soo gaaray Muqdisho ka dib safar uu ugu maqnaa dalka Turkiga Waxaa garoonka dayuuradaha Aadan cadde ku soo dhoweeyey masuuliyiin ka tirsan DF iyo Galmudug. Horay waxaa Muqdisho u joogay Madaxwayne Goboleedyadda...
Sarkaal la dhashay Madaxweynihii hore ee Somalia oo qarax lala beegsaday
Muqdisho:-Sarkaal ka tirsan Laanta dambi baarista Puntland oo lagu magacaabo Warsame Yuusuf Axmed (Yeey) ayaa saaka qarax lagula beegsaday gaarigiisa bartamaha magaalada Gaalkacyo. Sarkaalkan oo la dhashay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Marxuum C/llaahi Yuusuf Axmed, waxa la...
Dowlada Kenya oo dacwad u gudbineysa Golaha amaanka ee Q/Midoobay
Garsoore Kenyan oo la hadlay warbaahinta dalkaas ayaa sheegay inay dacwadda badda ee kala dhaxeysa Somalia u gudbin doonaan Golaha amaanka QM. Waxaa uu tilmaamay in qorshahan ay dowladda Kenya diyaarisay ka hor inta aysan bilaaban dhageysiga Dacwada oo maalinimadii shalay ka...